Digital Marketing, Kushambadzira kwenhare, Social Media Marketing
By Stefan Vanosimudza
Uri kunetseka kukurudzira vanhu kuti vatore download yako app mumusika uyu wakazara? Hedzino dzimwe nzira dzakaratidzirwa dzekutengesa yako app uye uwane zvimwe kurodha pasi.
Ungave uri kuronga kutanga varaidzo kana eCommerce app, rangarira kuti imusika une makwikwi anotyisa. Kunyangwe yakanyatsogadzirwa app inopa pfungwa yakanaka inogona kutadza pasina akakodzera ekusimudzira maturusi. Kutarisa pa kushambadzira yekushandisa kwako kubva pazuva rekutanga kunobatsira kunatsiridza kubudirira kwayo uye nekuwedzera kurodha pasi. Ndinovimba, iwe unogona kuzadzisa izvo nemazano ataurwa pamusoro.